EZIPHEZULU EZI-15 ZOMBANE EZIBALASELEYO ZAMADODA KUTHOTHO OLULUNGILEYO KUNYE NOKUSIKA - UHLOBO
Eziphezulu ezi-15 zeZinto eziBalaseleyo zoMbane zaMadoda-Esona siGqwesileyo semihla ngemihla kunye nokusika
Incakuba yendoda imisela inkangeleko nobuntu bayo, kodwa isenokungayiqondi nempembelelo yayo egqithileyo. Ukuqinisekisa ukuba ulusu lwakho lukhuselwe kakuhle, kuya kufuneka usebenzise ezona zixhobo zibalaseleyo zentengiso.
Izitshezi zombane ziyindlela yekamva, ke amadoda anomtsalane ngokwasebukhosini axhomekeke kuwo kuphela. Zonke ii-brand azenziwanga ngokulinganayo nangona kunjalo, kwaye zininzi izinto ezahlulahlula abenzi ababalaseleyo kwezona zingezantsi.
Ukuthintela iintlobo ezingaphantsi, jonga nje kule ncwadana yokucheba! Ukuba ufuna ubuso obugudileyo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ubuntununtunu besikhumba benziwa ingxelo ngazo zonke iindleko. Ngaphandle koko, uya kuba semngciphekweni wokusikwa okungapheliyo, amabala kwaye kunjalo, ukucaphuka.
Ixesha elingaphezulu, oku kuya kunxiba ubuso bakho kwaye kuvelise umbala we-wax; Okwangoku, indlela enobulali iya kuthoba kwaye ithambe njengoko iminyaka ihamba.
Ukuphatheka kunye nomthombo wamandla kufuneka kuthathelwe ingqalelo nakwisigqibo sakho. Zombini ezi zinto kufuneka zenziwe ngokufanelekileyo ukuze zihlangabezane neemfuno zomntu zokuzilungisa.
Sukuba nexhala; akukho nzima kangako! Ndenze umsebenzi onzima kwaye ndibeka i-15 ephezulu ye-shavers yombane yamadoda angaphantsi. Wamkelekile kwimfezeko edibeneyo. Yenza i-trim efanelekileyo kwaye usike yonke imihla, kwaye wonke umntu makabuze ubuqaqawuli bakho!
Ezona ziXhobo zoMbane ziBalaseleyo zaMadoda
1. IPanasonic ES8243A iShaver yombane NgeeNanotech Blades
Eyona nto ibalaseleyo: I-Arc4, ezine i-30 degree degree hypoallergenic nanotech blade enefoyile yentsimbi encinci engenacici.
Iimpawu zesitshayina kunye neentsingiselo
Kwishawari okanye ngaphezulu kwesinki, nokuba uchetywa phi na uyakonwabela ukuyazi le shaver yombane yePanasonic ikhuseleke ngokulula ukuba ingangenwa ngamanzi. Ngentloko eguqukayo ejikelezayo / ezantsi kunye necala kwicala lokuziva uziva ukhululekile. Emva kwesibonisi se-LCD esikhanyisiweyo kunye nezinto ezongezelelekileyo ezinje nge-pop-up trimmer ilele entliziyweni yale shaver yombane. Imoto enesandi egudileyo ekwazi ukufikelela kwisantya se-13,000 CPM. Yintoni eyahlukileyo ngayo sisiphumo esinaso ekusebenziseni ibhetri. Ngokubanzi iya kuvumela ibhetri ukuba ihlale i-shaves ezintlanu okanye nangaphezulu ngaphambi kokuba iphele. Ngokubhekisele kubude bexesha elide, unokulindela iminyaka emithandathu ukuya esixhenxe ngaphambi kokuba ukutshajisa kube sisiphazamiso, ekulixesha elide zonke izinto ziqwalaselwa!
2. IPhilips Norelco 1190X46 6800 iShaver yombane
Eyona nto ibalaseleyo: I-Gyroflex 2D enamacala amabini, ubomi bebhetri obude kakhulu.
Xa kuthelekiswa ne-6600 engentla ufumana yonke into ususe inkqubo epholileyo yeJet. Ukuba awunangxaki nokuzicoca ngokwakho i-shaver yakho yombane uya kufumana isincamathisi sokucheba iindevu zebhonasi. Akukho lurhwebo lubi xa ucinga ukuba ugcina imali encinci kwinkqubo nayo! Ukungathethi, i-6800 yongeza kwenye imizuzu eli-10 yokucheba, ukuzisa iyonke ukuya kuthi ga kwiyure eli-1 ngaphambi kokuba ibhetri ifune enye intlawulo.
3. IBraun Series 7 790cc iPulsonic Electric Shaver
Eyona nto ibalaseleyo: Itekhnoloji yePulsonic ye-10,000 ukungcangcazela okuncinci ngomzuzu.
Dibana neshever yombane eguquguqukayo ngokupheleleyo yamadoda nguBraun. Ngaphandle kokungangenwa ngamanzi, izinto zinyuselwa inotshi ngeendlela ezintathu zokwenza umntu kunye nococeko lokucoca kunye nokuhlaziya inkqubo. Ukusuka ekucoceni ukuya ekumiseni, kunye nokuthambisa ukutshaja i-shavsonic shaver ngokuqinisekileyo ikwenzela yonke into. Ukongeza kwizinto ezintathu zokusika, ikwabonisa i-Optifoil kunye ne-ActiveLift ukukopa kunye nokusika ezo nwele zilusizi zilala phantsi. Ukufumana iindawo ezinzima ngakumbi zokutsheva kwendoda ezinje ngesilevu okanye umhlathi, intloko eguqukayo iyajikeleza ngokulula.
4. IPanasonic ESLA93K Arc4 iShaver yokuSebenzisa uMbane ngeNtloko ye-Multi-Flex ejikelezayo neNtloko kunye noCoceko oluzenzekelayo
Eyona nto ibalaseleyo: I-Arc4 kunye nenkqubo yokucoceka kwonyana.
Kutyalo-mali oluphakame kancinane kunesitshetshe sombane esingasentla, uya kufumana zonke iintsimbi kunye neempempe kunye nokuphuculwa okumbalwa. Umzekelo, iimoto ziyaqhuma ezinye ii-CPMs ezili-1 ukuya kwi-14,000 ye-CPM iyonke enamandla. Ukuba ubunokuthelekisa kumgangatho weshumi lamawaka kwezona zininzi zeshevers zamadoda zimalunga ne-1.5x ngokukhawuleza kunye nokusika ngamandla angama-2x. Nangona kunjalo, eyona nto yenza ukuba le shaver ivelele sisikhululo esicocekileyo nesibiza imali eninzi. Ngokuqinisekileyo, kubiza imali ethe kratya kodwa nge-sonic vibration unokuqinisekisa ukuba i-razor kunye nococeko lwakho lucacile.
5. Remington F5 5800 zitshajwe ngefoyile ye Interceptor Electric Shaver
Eyona nto ibalaseleyo: Ixabiso. I-Pivot kunye ne-Flex nge-teknoloji ye-interceptor elula kodwa echanekileyo ngokuchanekileyo.
I-shaft yombane ye-F5 yamadoda ibonisa uyilo olunokuhlambeka, isilungisi se-pop-up kunye neklasi ekhokelela kwiklasi ye-60-minuete yebhetri yexesha lokubaleka. Kumadoda angayikhathalelanga intambo, uya konwaba xa usazi ukuba ungazifaka nanini na. Ukukunceda ugcine umkhondo wobomi bebhetri obuseleyo kukho umboniso we-digital digital ukwenza ukucheba okungenantambo kube lula. Ngokwamava okutsheva, iiF5 fairs ngokufanelekileyo. Iibhloko zensimbi ezingenasici zidityaniswe netekhnoloji yePivot kunye neFlex ukuvumela i-shaver foil nganye ukuba iguqule ngokuzimeleyo kumagophe akho obuso. Ngoku, nangona ngokuqinisekileyo ingafiki nazo zonke iintsimbi kunye neempempe, inqaku lamaxabiso lenza ukuba libe lelinye lawona malwelwa aphambili ngokwexabiso.
6. IBraun 3 Series 380S-4 Emanzi kunye neyomileyo
Eyona nto ibalaseleyo: Itekhnoloji yeSensofoil yokwenza ukusika iindevu zakho kube lula kwaye kulungiselelwe ngakumbi.
Emanzi okanye eyomileyo, le shaver yombane yamadoda ayi-100% ayinamanzi kwaye iyahlambeka. Ifika nezinto zokucheba umthi kunye nokucheba iinwele ezinde ukwenza ukunciphisa loo macala angalawulekiyo emdaka kunye namadevu asendle alula. Umboniso we-digital digital ugcina uhlaziywa kwinqanaba lebhetri kunye nenkqubo yokutshaja. Ngelixa i-Ni-MH ibhetri ye-380s ihamba kakuhle ngokuhambisa ixesha elide kunye nokuphinda iindleko.
7. IPanasonic ESLV61A Arc 5 iShaver yombane ngeNtloko yePivoting ye-Multi-Flex
Eyona nto ibalaseleyo: I-Arc5, isihlanu se-30 degree hypoallergenic nanotech blade enefreyimu encinci yentsimbi engenacici.
Ukuba iArc4 yayingenamtsalane ngokwaneleyo, iArc5 ngokuqinisekileyo ihambisa ishevu engenasiphako ekhethekileyo onqwenela ngayo. Ngaphandle kokungangeni manzi, kuninzi ngakumbi ukuthanda. Ngefoyile yokuphakamisa, gqibezela i-foil, kunye ne-silt foil akukho nwele ime ithuba-ngokoqobo. Intloko ejikelezayo ijikeleza ngokungakhathali njengoko ijikeleza ebusweni bakho, ngelixa iiNanotech zentsimbi ezingenasici ezingenanto ezingenanto ezingenanto zinqunywe ngamandla kunye nokuchaneka. Ukwenza amandla kuyo yonke yimoto ye-14,000 ye-CPM kunye nenqanaba leshumi le-LCD screen ukuze ikugcine ukuloop.
8. UPhilips Norelco 1250X40 8000 Uthotho lweSensoTouch 3D Razor Electric
Eyona nto ibalaseleyo: IGyroflex 3D contour, iindlela ezintathu zentuthuzelo. Awkward ekuqaleni, obalaseleyo ngokuziqhelanisa.
Ngokuqinisekileyo, intloko ye-3D ibonakala iyinkimbinkimbi kunye noyilo lobunikazi, kodwa ungenzi mpazamo, ihamba ngeendevu ngaphandle kokulahleka nto. Ziitraki ezintathu zokucheba enkosi kwintloko ye-UltraTrack yokubamba zonke iinwele, ngelixa i-pop-out trimmer masikuphathe kakuhle ukukhangela kunye nemadevu. Ngokumalunga nobomi bebhetri, uya kufezekisa phantsi kweeyure ezipheleleyo zokucheba kwityala elinye. Ngamanye amagama, imizuzu engama-50. Nje ukuba kuphele, ixesha lokuhlawulisa liphantse lafana kunye nemizuzu ye-13 eyongezelelweyo.
9. IPhilips Norelco 6948XL41 2100 iShaver yombane
Eyona nto ibalaseleyo: Ixabiso. Intloko yeCloseCut ngeFlex kunye neFlat system.
Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali ungakhathazeki, le shaver yombane yamadoda yeyona # 1 ithengisa kakhulu kwiklasi yayo. Kukhulu kwixabiso kunye nomgangatho wokutsheva ngaphandle kokunikezela kwisivumelwano kakhulu. Umzekelo ngelixa ufumana i-nifty pop-up trimmer, urhwebo luza xa kufuneka womile ibrashi coca i-shaver yakho endaweni yokusebenzisa amanzi. Okongeziweyo ngaphandle, kuthe cwaka, kukhululekile kwaye kusondele ngaphandle kwentsimbi engafunekiyo. Iintloko ezisikiweyo ezivaliweyo zenza umsebenzi obalaseleyo ngelixa inkqubo yeFlex kunye neFlat inika intshukumo yokujikeleza ngokwaneleyo ukufumana zonke iinwele. Ngoku ukuba ukuyo ngenxa yokucheba kunye nokucheba kwedola, uza kuyithanda. Nangona kunjalo, ukuba ibhetri ehlala kuphela imizuzu engama-35 kwaye ithathe iyure esi-8 ukuhlawulisa iyakucaphukisa, mhlawumbi kungcono emva koko ugcine kwaye uchithe idenariyo entle kwenye i-shaver.
10. IPhilips Norelco 6600 iShaver yoMbane
Inzondo ehlaziya ishever yakho yombane rhoqo? IPhillips Norelco Shaver 6660 isombulula ingxaki ngokulula. Umrhumo opheleleyo uhlala kwimizuzu engama-50 okanye malunga neentsuku ezili-17. Ukuyibeka kolunye uluvo unokufumana malunga neeveki ezimbini zeeveki ezisibhozo ngaphambi kokuba ibhetri ibize. Ukugcina umkhondo kukwakho amanqanaba amabini ebhetri. Ngokwentsebenzo yokucheba le shaver ye-eclectic yenza amabakala aphezulu. Iipivots ezijikeleze i-GyroFlex 2D ngokulula, zikhokelela ekushefeni okusondele ngakumbi. Uyakufumana kwakhona ukuPhakamisa kunye nokusika inkqubo ye-blade ezimbini kunye ne-SkinGlide umphezulu ukwenza izinto zibe mnandi ngakumbi. Ngelixa ifanelekile ngeeshevu ezimanzi okanye ezomileyo enkosi ngetywina le-AquaTec, yintoni eyenza le razor yombane ibonakale ngakumbi ngakumbi yiJet Clean System. Mane usete ngaphakathi kwaye wenze wonke umsebenzi ukusuka ekucoceni ukuya ekuthambiseni nangaphezulu.
11. IPhilips Norelco 7810XL iShaver yombane
Eyona nto ibalaseleyo: Inkqubo ye-Reflex Action eneentloko ezintathu ezidadayo.
Intlawulo ekhawulezileyo yemizuzu emi-3 Enye yezinto endizithandayo malunga nesitshixo sombane samadoda angama-7810 kukukhanya okutsha okukhawulezayo. Kwimizuzu nje emithathu ulungele enye into yokucheba. Xa kufikwa kumgangatho wokucheba, uya kuchukunyiswa yinkqubo ye-Reflex Action ebonisa izinto ezintathu ezijikelezayo. Uyilo oluyingqayizivele lunika i-razor ngakumbi i-glide xa ihamba ngaphezulu kwee-curve ukuze ithuthuzele kwaye isondele. Kwaye uyakonwabela iSuper Lift kunye neTekhnoloji yokusika esebenza ngee-blade ezimbini, enye yokuphakamisa enye ukusika. Ngoku, ngelixa isenokungazicoci ngokwakho, kodwa inokucoceka ngokupheleleyo. Umphezulu uphonsa phantsi ukuveza indawo yokuqokelela iinwele, esenza ukuba inkqubo isondele kufutshane nomzamo.
12. UPhilips Norelco 8240 Isantya-XL seMadoda sokuTywina kombane
Eyona nto ibalaseleyo: Isantya se-3 XL
Iintloko zentsimbi enkulu yokutsheva Inyathelo elingaphezulu kwe-7810, i-8240 ifaka yonke into kunye nokudibanisa okungakumbi. Umzekelo, iintloko ezintathu ezinesantya esine-XL zibonelela ngaphezulu kwendawo yokucheba. Xa kuthelekiswa neentloko ezininzi ezijikelezayo ezijikelezayo, ijikeleze inzuzo engama-50%. Ezinye izinto zibandakanya ukutyabeka okulwa ne-antibacterial, trimmer trimmer, kunye ne-SmartTouch Contour-following. Kwaye ngelixa iincakuba zombane zexabiso eliphezulu zamadoda zilandela umkhwa ngokuzicoca ngokwakho, oku akukabandakanyi. Nangona kunjalo, i-Philips inikezela ngenkqubo ye-FastRinse yayo eyenza izinto zibe lula ukuba awunguye ucoceko.
13. UPhilips Norelco S972184 9700 Umbane oCoca uMbane
Eyona nto ibalaseleyo: Intloko-yokucheba intloko ye-8 kunye nezicwangciso zentuthuzelo ezenzelwe wena.
Le shava intle ikhangeleka ingakholeleki njengoko isebenza. Ngaphandle kokuphumelela ibhaso loyilo le-2015 iF, i-9700 ipakisha i-punch ngokwendlela yokusebenza kunye nokusebenza. Kubaqalayo, kukho iContour Detect Technology eneentloko ezihamba ngokuzimeleyo kumacala asi-8. V-umkhondo wee-blade ezichanekileyo kunye nezicwangciso ezintathu ezizodwa zokuthuthuzela ukwahluka isantya ukusuka kancinci ukuya ngokukhawuleza. Ukunika amandla konke ibhetri ye-lithium-ion ekwazi ukuhambisa ukucheba imizuzu engama-50, ixesha lokuphinda wenze enye iyure, kunye nokukhawulezisa ukutshaja okukodwa kwimizuzu emi-5. Ukuhlala unolwazi kwiziko ledijithali elikuxelela yonke into ukusuka kubomi bebhetri ukuya kuseto lokuthuthuzela olukhethiweyo. Njengamacandelo ombane aphezulu okuphelisa umbane emadodeni, le iza nenkqubo ekhethekileyo ye-SmartClean pro. Ukusuka ekucoceni nasekumiseni kuyenza konke, kunye nomjikelo uya kuthi uthambise iincakuba zakho ukuphelisa ukungqubana.
unganxiba ibhanti nezixhaso
14. IPhilips Norelco 3100 iShaver yoMbane
I-9300 inokuba linyathelo elingaphantsi kwe-9700 kodwa inyani kukuba, awulahli kwaphela. Ufumana yonke into kubandakanya ukusika ngokuchanekileyo, inkqubo ye-SmartClean pro, njl. Thabatha umboniso wedijithali ophambili. Endaweni yokuba le shaver yamadoda ifaka isikrini se-LED ngemivalo emi-5 elula.
15. UPhilips Norelco 9300 Shaver wombane
Eyona nto ibalaseleyo: Ixabiso elifanelekileyo lohlahlo-lwabiwo mali. Intuthuzelo isikwe ngokudibanisa neFlex kunye neFlat.
Ngokuqinisekileyo, ayisiyeyona nto ibiza kakhulu yokucheba ngombane kwimarike okanye eyona ndawo ithengwa kakhulu, kodwa inika ixabiso elikhulu lento uyifumanayo. Iqala ngoyilo olunokuhlanjwa kwaye kube lula ukugcina i-HQ8 inokubuyiselwa entloko. Uya kugqiba ukuyitshintsha kanye ngonyaka. Ubomi bebhetri, buhlala imizuzu engama-40 kwaye bufuna ukuhlawulwa iiyure ezingama-8. Kodwa ungakhathazeki, kukho intlawulo ekhawulezileyo yemizuzu emi-3, ungasathethi ke ngentambo ongayikhetha xa utsheva ibango. Ngoku, ngelixa ixabiso liphantsi usafumana inkqubo yeFlex kunye neFlat yokwenza ukucheba ngeenxa zonke kwiindawo ezigobileyo zobuso bakho umoya opholileyo.
uziva njani ukufumana tattoo
Izimvo zokuqhuba kumakhaya amancinci
amadoda aneenwele ezinde ezibusy
Izimvo zokulala zamadoda kwigumbi lokuhlala